२८ बैशाखदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा खुल्ने
काठमाडौं । सरकारको निर्णयअनुसार आगामी आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका देशभरका शाखा खुल्ने भएका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र, सरकारी संस्थामार्फत अतिआवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये एकतिहाइ कर्मचारीबाट आलोपालो गरी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा आइतबारदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार आवश्यकताका आधारमा एकतिहाइ कर्मचारी राखेर शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। नेपाल बैंकर्स संघले सबै बैंकका सम्पूर्ण शाखा खोल्न आग्रह गरेको छ।
एक पटकमा शाखा कार्यालयमा पाँच जनाभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई प्रवेश नदिने, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री बैंकका कर्मचारी र सेवाग्राहीका लागिसमेत अनिवार्य गरिएको छ। ‘लकडाउन’को अवधिमा बैंकले आलोपालो सेवा दिँदै आएका थिए। शाखा कार्यालय नजिक रहेका एटिएम काउन्टर बन्द गरिएका थिए भने अन्य स्थानमा एटिएम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।
सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि कोरोनाको संक्रमण बढ्न नदिन ‘लकडाउन’ घोषणा गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था आंशिकरुपमा खुलेका थिए। उनीहरुले ग्राहकलाई बढीभन्दा बढी विद्युतीय माध्यममार्फत कारोबार गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारको पछिल्लो निर्णयलगत्तै बैंकका शाखा खुल्ने निर्णयले ग्राहकलाई थप राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ।
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको बेला सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाउनु गलत भएको बताएका छन् । संसदमा...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याइएको बताएका छन् । बजेटको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा...
आगामी आबको बजेट रु. १४.७४ खर्बको सार्वजनिक
काठमाडौ । सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनका अनुसार कुल...
साल्ट ट्रेडिङ टोल-टोलमा इन्डक्सन चुलो बेच्दै
काठमाडौं । खाद्य कम्पनीको स्टक सकिएपछि बजारको माग धान्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले इन्डक्सन चुलो बेच्न थालेको छ । सरकारी कम्पनी कर्पोरेसनले लकडाउनको समयमा उपभोक्ताको माग अनुसार दैनिक...
पाम आयलपछि नेपालको चिया आयात पनि रोकियो
काठमाडौं । सिमा विबादले चर्को रुप लिंदै गर्दा नेपालको पाम आयलको आयात रोकेको भारतले चिया आयात पनि रोकेको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद सुरु भएसँगै केही दिनयता चिया आयात रोकेको हो । उद्योग,...
अब राजाको तस्विर भएका नोट चलन नआउने
काठमाडौं । अब पुर्व राजाको तस्विर भएका पुराना नोटहरु चलनचल्तीमा नआउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्व राजाको तस्विर भएको सहित विभिन्न एक दर्जन नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन बैंक तथा...
विदेशबाट पैसा पठाउँदा प्रति दिन १५०० डलरको सीमा
काठमाडौँ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले देशमा रेमिट्यान्सको रुपमा पैसा पठाउँदा प्रति दिन प्रति व्यक्ति प्रति पटक १५०० डलरको सीमा तोकिएको छ । नेपाल राष्टबैंकको विदेशी विनियम...
चीनको सिआनदेखी काठमाडौंसम्म कार्गो रेलसेवा सुरु
काठमाडौँ । चीनको पल्लो सान्सी प्रान्तको सिआनदेखी काठमाडौंसम्म रेलसेवा सुरु भएको छ । शुक्रवार हिंडेको रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउनेछ । त्यहांबाट सडकमार्ग हुंदै सामाग्री मालबाहक...
अनलाइनमार्फत सञ्चय कोषबाट सापटी लिन सकिने
काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लागू गरेको लकडाउनसँगै बन्द रहेका कोषका सेवामध्ये हाललाई विशेष सापटी सेवा अनलाइनमार्फत लिन सकिने गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ...
फेरी भारतद्वारा पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । भारतले पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा विदेशी मुद्राको अभाव हुने संकेत देखिएको छ । भारतले पाम आयल आयात नगर्ने भनेपछि भारतमा पाम आयल निर्यात गर्दै आएका नेपाली...
लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै ४४ प्रकारका उद्योग खुल्ने
काठमाडौं । सरकारले शुक्रबारदेखि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै ४२ प्रकारका उद्योगहरु संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको...
कांग्रेसद्धारा कोरोना प्रभावबारे व्यवसायीसँग छलफल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलगायतका शीर्ष नेताहरुले उद्योगी तथा...
निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई ५०% बढी तलब दिन नसक्ने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आफ्ना श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ...
ऋणको ब्याज ३ प्रतिशत घटाउन व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । निजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गरेको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका...